San Htun's Diary: Culture Shock !
(Ameircan Culture lecture ချိန်မှာ မှတ်မိလိုက်သမျှ ဖောက်သယ်ပြန်ချပါတယ်။)
"Hi. How are you?" လို့ နှုတ်ဆတ်တယ်. ကောင်လေးကို "fine. thanks you. and you?" ပြောမလို့ ပြင်တုန်း ဘချောသားက အဝေးကို ရောက်သွားပြီ။ တီချယ်တို. နိုင်ငံမှာက
"Fine. Thanks you. And you?" ဆိုပြီ: ရှည်ရှည် လျားလျား နှုတ်ဆတ်တတ်ကြတာ။ US မှာတော. "Hi. How are you?" က"Hi" ပါတဲ.။
အမေရိကန်တွေရဲ. စကားထဲမှာ ပါနေကျက F***,Crap။ စလုံးမှာ တ lah lah လို့ ပြောသလို USမှာလည်: တ F*** F*** နဲ.။ စလုံးမှာ "What lao" USမှာတော. "Crap" တဲ. ။ခွဲခါနီး နှုတ်ဆက်တာက စလုံးမှာတော. "Bye Bye"၊ USမှာတော. "Haveagood day." တဲ.။စလုံးတွေက Complaint တက်ဖို. ဝန်မလေးသလို အမေရိကန်တွေကလည်: ချီးမွမ်:စကား ပြောဖို. ဝန်မလေးဘူး။ ချီ:မွမ်:စရာ မရှိရင်တောင် ကြံဖန်ပြီ: ချီ:မွမ်:နေတာများ ရာသီဥတုတောင် အလွတ် မပေးဘူး။
Middle East နိုင်ငံသူကို အမေရိကန်တယောက်နဲ. မိတ်ဆက်ပေးတယ်.အခါ ကမ်:ပေးတယ်. အမေရိကန်ရဲ. လက်ဟာ လေထဲမှာ အိုးတိုးအမ်:တမ်: ရပ်သွားဖူးတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ မိန်:ကလေးတွေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေ့ မရှိပါဘူးတယ်.။ US မှာတော. လက်ဆွဲနှုတ်ဆတ်တာ၊ပွေ့ဖက်တာ၊ပါးချင်းအပ်တာက နှုတ်ဆတ်ခြင်းပါ။
အမေရိကန်နဲ. အာရပ်တွေ စကားပြောကြရင် အာရပ်က စကားပြောရင်း ရှေ့တိုးတိုးလာ အမေရိကန်က စကားပြောရင်း နောက်ကို ဆုတ်ဆုတ်နဲ. အတော်.ကို ဂွကျပြီ: ကိုးယိုးကားရား နိုင်တယ်. အဖြစ်။ ဖြစ်ရပုံက အာရပ်တွေက စကားပြောရင် နီးနီးလေး ကပ်ပြောကြသတဲ.။ အမေရိကန်တွေကတော. မနီးလွန်း၊မဝေးလွန်: အကွာအဝေးနဲ. ပြောကြသတဲ.။
ဗီယက်နမ်နဲ. နီပေါကတော. တွေ့တာနဲ. အသက်မေးတော.တာပဲ။ အာရှယဉ်ကျေးမှုအရ အသက်သိမှ မဘယ်သူ၊ကိုဘယ်ဝှါ ခေါ်လို့ရမှာကိုး။ ဒီလို ခေါ်မှ ယဉ်ကျေးတာလေ။ US မှာတော. အသက်၊ Personalမမေ:တာကမှ ယဉ်ကျေးတာတဲ.။
လက်ချင်းချိတ်ထားတယ်. အာဖရိက ကောင်လေး၂ယောက်ကို အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားနဲ. အကဲခတ်ကြမယ်။ ဖြစ်ရပုံက အာဖရိကမှာ ခင်မင်ကြရင် လက်ချင်းချိတ်ထားတာတဲ.။ လိင်တူချစ်သူ အခွင့်အရေး ရှိတယ်. US မှာတော. လိင်တူချင်း လက်ချိတ်ထားရင် တမျိုးအထင် ခံရမယ်။ ဒါ့ကြောင်. တို.များအုပ်စုထဲကများ တယောက်ယောက်က လက်လာချိတ်ရင် လက်ညိုးလေးထောင်၊ ခေါင်းကလေးရမ်:ပြီ: "It is not good." လို့ စကြတယ်။
US မှာ လူတိုင်းဟာ သမ်မတဖြစ်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒီကုမ်မဏီကို ဘာမှမရှိတယ်. အခြေအနေကနေ ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ.တာလို့ လက်သီးလက်မောင်းတန်:ပြီ: ပြောနေတယ်. ကုမ်မဏီပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးများကို မြင်တွေ့ရမယ်။ အဖေက Director မို့ သားက Director ဖြစ်လာတာ မရှိ။ ယောက်ကျားနဲ. မိန်:မ အခွင့်အရေး အတူတူရှိတယ်. USမှာ CEO တာဝန် ထမ်:ဆောင်နေကြတယ်. Lady Boss တော်တော်များများကို မြင်တွေ့ရပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံလို အနှစ် ၅၀၀၀ ယဉ်ကျေးမှု သက်တမ်:မရှိတယ်. USဟာ ထိန်:သိမ်:စရာ အမွေအနှစ် မရှိလို့ သဘာဝဘေးအန်တရယ် ထိန်:သိမ်:ကာကွယ်ရေးကို စောက်ချ လုပ်ကိုင်တယ်။
ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ. မိတ်ဆွေ ဂျာမန်မဟာ ဘုရားတရား ကြည်ညိုလွန်:လို့ ဘယ်ခရီးသွားသွား ဘုရားဆင်းတုတော်ကို သယ်သွားတယ်။ တနေ့တော. ဂျာမန်မ ဘုရားဆင်းတု သိမ်:ဆည်:နေတာ မြင်ရတော. ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ခမျာ မျက်လုံးပြူ:သွားပြီ: ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးနဲ. အသာဖိလိုက်ရတယ်။ အပေါ်အတွင်းခံလေးနဲ. ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ထုပ်ပိုးနေတာလေ။ မေးကြည့်တော. ဘုရားဆင်းတုတော်ဆိုတာ မသန့်တာနဲ. မထုပ်ရဘူး ဆိုလို့ သူ့မှာ ရှိတယ်.အထဲက အသန့်ဆုံး၊ အနူးညံ့ဆုံးနဲ. ထုပ်နေတာတဲ.လေ။ ဟုတ်တော.လည်: ဟုတ်သား သူ့အတွင်းခံက ပိုးသားဆိုတော. နူးညံ.တယ်လေ။ ဆရာမကြီ:က အတွင်းခံနဲ. မထုပ်ရတယ်.အကြောင်း သေသေချာချာ ရှင်းပြတော.မှ ဂျာမန်မက ပြန်ပြောရှာတယ်။ "It is culture chock" တဲ.။